The Myanmar Opportunities — Page2of4—
The Myanmar Opportunities
Two scholarships to the Winter School on Federalism and Governance.
+++ Call for applications ++ Two scholarships supported by HSF Myanmar to the Winter School on Federalism and Governance. (Please…
အားလုံးအကျုံးဝင် ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းဆိုင်ရာ စွမ်းရည်မြှင့်သင်တန်း (Online) လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း
🎯🎯သင်တန်းရည်ရွယ်ချက်👇👇၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် မသန်စွမ်းအမျိုးသမီးများအပါအဝင် မသန်စွမ်းသူများသည် ၎င်းတို့၏ မဲပေးခြင်းဆိုင်ရာအခွင့်အရေးများကို ကောင်းစွာသိရှိနားလည်စေရန်နှင့် ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်များ တိုးတက်လာစေရန်။ 👩‍👩‍👧‍👦👨‍👩‍👦သင်တန်းအစီအစဉ်နှင့် သင်တန်းသားဦးရေ👇👇သင်တန်းမှာ မသန်စွမ်းသူများ(ဉာဏ်ရည်မသန်စွမ်းသူများ၏ မိဘများလည်း အပါအဝင်ဖြစ်ပါသည်) အတွက် ပြုလုပ်သည့် ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း…
2021/2022 Chevening Scholarships are now open !
Chevening is the UK Government’s global scholarship programme that offers future leaders the unique opportunity to study in the UK.…
ကိုရီးယားအစိုးရ ပညာသင္ဆု ေလ်ွာက္ထားနိုင္ပါၿပီ။
၂၀၂၁ခုနှစ် အစိုးရဖိတ်ခေါ် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းကျောင်းသား ပညာတော်သင်ဆု ရွေးချယ်ခြင်းဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက် (က) ဖိတ်ခေါ်သည့် ပညာသင်ဆု : စုစုပေါင်း ၅နှစ် (ကိုရီးယားဘာသာစကား သင်တန်း ၁နှစ်+ တက္ကသိုလ် ၄နှစ်) (ခ) ဖိတ်ခေါ်သည့် ဦးရေ…
🔴 November 8 Diary 2020 စာအုပ်အတွက် စာမူဖိတ်ခေါ်ခြင်း 🔴
၁။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ၊ နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက် ရွေးကောက်ပွဲမှတ်တမ်း စာအုပ်ကို " နိုဝင်ဘာ ၈ ဒိုင်ယာရီ " အမည်ဖြင့် ထုတ်ဝေနိုင်ရန် ပဲန်မြန်မာက စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ ၂။…
စေတနာ့ဝန်ထမ်း (ကာလတိုစောင့်ကြည့်လေ့လာသူ) များခေါ်ယူခြင်း
ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာပြည်သူ့လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ (PACE) အနေဖြင့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်စဉ်များကို စောင့်ကြည့်လေ့လာလျက် ရှိပါသည်။ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ရွေးကောက်ပွဲကို ရွှေ့ဆိုင်းရန်မရှိဟု ပြီးခဲ့သည့် စက်တင်ဘာလ ၁၉ ရက်နေ့က ပြောကြားခဲ့ပြီး အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရန်ရက်မှာလည်း ၄၄ ရက်သာ…
Asia Federalism Dialogues
Asia Federalism Dialoguesအာရှ ဖက်ဒရယ်စနစ်ရေးရာ ဆွေးနွေးပွဲများ(Please find the English version below)++++++++++++++++ဟန်းဆိုင်ဒယ်ဖောင်ဒေးရှင်း အိန္ဒိယ မှ ဦးဆောင်၍ တောင်အာရှနှင့် အရှေ့တောင်အာရှရှိ ဟန်းဆိုင်ဒယ်ဖောင်ဒေးရှင်းရုံးများက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သော အာရှ ဖက်ဒရယ်စနစ်ရေးရာ ဆွေးနွေးပွဲများ…
The AFC has not been notified of the Myanmar squad for the World Cup despite the postponement of the ASEAN level
The Asian Football Confederation (AFC) has not yet commented on the remnants of the 2022 World Cup, which will feature…
Nay Pyi Taw City Development Permanent Secretary says no land has been allocated for land under construction in Nay Pyi Taw Hotel Zone (1), back of Zambu Thiri Township.
The land being developed behind the Max Myanmar Hotel in Nay Pyi Taw Hotel Zone 1 has not been allocated…
List of NLD party candidates
Seen at the NLD's 2015 general election campaign (Photo: Jay Maung Maung (Amarapura)) The list of candidates for the second…
SUBSCRIBE FOR EVERYDAY OPPORTUNITIES!
We share scholarship and job opportunities.
Mercy Crops Myanmar Vacancy Announcement
Mercy Crops Vacancy Announcement
Scope of Work for Fact Checking Job
Student Energy’s Leaders Fellowship Program
The Inclusive Business in Myanmar online bootcamp